Wasiir Xukuumadda Ka Tirsan Oo Weererkii Ugu Cuslaa Ku Qaatay Faysal Cali Waraabe, Cunsuriyad Uu Ku Eedeeyey, Kuna Faanay In Awawgii Sameeyey Xadka Somaliland Iyo Soomaaliya - Wargane News
Home Somali News Wasiir Xukuumadda Ka Tirsan Oo Weererkii Ugu Cuslaa Ku Qaatay Faysal Cali...
Wasiir Xukuumadda Ka Tirsan Oo Weererkii Ugu Cuslaa Ku Qaatay Faysal Cali Waraabe, Cunsuriyad Uu Ku Eedeeyey, Kuna Faanay In Awawgii Sameeyey Xadka Somaliland Iyo Soomaaliya
Wasiirka Wasaaradda Biyaha Somaliland Md. Saleebaan Cali Koore ayaa si layaab leh weerar adag ugu qaaday Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo uu ku duray wax uu Wasiirku ugu yeedhay kala qaybin dhinaca bulshada ah isaga oo dhinaca kalena difaacay Boqor Burhaan Boqor Muuse, Boqorka Beelaha Daarood safarkii uu ku yimid gobolo Somaliland ka mid ah iyo wixii uu ka hadlayba halka Wasiir Saleebaan Guddoomiya UCID ku sheegey in uu yahay shakhsi cunsuri ah oo muddo badan soo hor taagnaa shacabka Somaliland.
Wasiirka Wasaaradda Biyaha Somaliland Md. Saleebaan Cali Koore oo shalay ka hadlayay Xaflad ay ku qalin jabinayeen arday wax ka baratay Jaamacadda GOLIS ayaa waxa uu dhammaan hadalkiisii madashaasi laga siiyay weerar culus ku qaaday Guddoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo uu ka daba socday hadallo uu hore Faysal u sheegay balse aanu Wasiirki faahfaahin.
Wasiirka Wasaaradda Biyaha Somaliland Md. Saleebaan Cali Koore oo arrintaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Siyaasiga aannu rabnaa waa ka nagala shaqeeya sidii aanu dadkaa Gobolada Bariga ee ku nool inta isku xidha Somaliland iyo Soomaaliya nagala shaqaynaya ee nagu garan taagan in dadkaasi walaalahood reer Somaliland wax la qaybsadaan oo ay wax la wadaagaan balse maaha siyaasiga kala qaybinaya. Ma aha siyaasiga yasaya ee xaqiraya oo ereyada qaldan ku odhanaya. Ma aqbali karno umadduna ma aqbali karto 18 sannadood ayaa rag xisbi hor taagan yihiin. reer hebel baa reer hebel wax ku samaynaya la soo taagan yihiin wuxuuna rabaa in uu yidhaahdo xisbibaan guddoomiye ka ahay. Waan ka xumahay in dadka Jaamacadda ka baxaya aan dhagahooda wax xun maqashiiyo laakiin qofka xun ee Somaliland kala dhantaalaya ee isir u qaybinaya ee reer hebelnimo wada in umaddu qabato xaq bay u leedahay. ma reerbaa Somaliland leh mise waa la wada leeyahay?. Miyaynu u baahanahay markaa in la reer hebeleeyo?. Umaddani waxa ay u baahan tahay qaran wada kaca, qaran is leh iyo xuduudo is leh iyo dal is leh iyo ummad isku tashata iyo ummad aan kala tashan, ummad aan la qaybin iyo mid aan loo reer hebelayn. Qof kasta oo umaddan kala qaybinaya aan ku nidhaahno waar ka joog. Waa in aan cod midaysan ku diidnaa. Waligay qof uma jawaabin laakiin 27-kaasi sannadood waxaan dadka isku daba wadnaa wax kale maaha waa umadda Somaliland ha midawdo. Xuduudka Somaliland annaga ayaa samaynay. Koore ayaa sameeyey aniganana Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa la i yidhaahdaa. Ninkii sameeyey ayaan ka soo jeedaa waxaanan aaminsanahay in aan xuduudka sameeyey oo aan dalka ka mid ahay oo leeyahay. Waa wax lala yaabo nin guddoomiye xisbi ka ahi inta uu halkan isa soo taago in uu iga dhigo qof aan dalka xuquuq ku lahayn. Umadda waxaan leeyahay guud ahaan gudo iyo dibadba in ninka sidaa u hadlaya aanay u qaadan in laga wada midaysan yahay oo lala qabo waa mid isaga u gaar ah oo waa shakhsi cunsuri ah. Waa maalintii koowaad oo aan qof si fagaare ah uga hadlo aaadbaanan uga xumahay laakiin way ka fursan wayday. Markii lagu soo celceliyey way ka fursan wayday. Boqorka laga hadlay anaa ku soo dhaweeyey Jamhuuriyadda Somaliland aniga oo wasiir ah. Waxaanay ahayd arrin aannu xukuumad ahaan isla qaadanay. Boqorku (Boqor Burhaan) wax badan buu qabtay deegaan badan oo dhibi ka jirtay ayuu dhibkii ka qayb qaatay. Waa nin dhaqan oo Somaliland iyo Soomaaliya toona kamaanaan wada hadal annagu. Si dhaqan ah ayuu meel u tagay oo wax uga qabtay. Cunsuriyad maaha. Reer hebelnimo lama wado”.
Dhawaan ayay ahayd markii Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee xisbiga KULMIYE Maxamed Cabdi Dheere uu Gacanta saaray Guddoomiye Faysal Cali Waraabe oo ay ku kulmeen Huteel Maansoor taasi oo keentay in Guddoomiyaha UCID dhaawac fududi ka soo gaadho.
Dahabshiil oo Racfaan ka Qaadatay Xirnaanshaha Xarunteeda Nairobi
The massive progress accomplished by the Somaliland current government throughout the country deserves their mandate office be extended
Somaliland: “Shaadhkii KULMIYE Waanu Gubaynaa…” Madax-dhaqameed Iyo Waxgarad Ka Mid Ah Beesha Habar-jeclo Oo Eedaymo Culus U Jeediyay Xukuumadda Madaxweyne Biixi
Somaliland: Xisbiga WADDANI Oo Madal Aan Ujeeddadeeda La Fahmin Ku Qabsaday Magaalada Hargeysa
Somaliland: Cawil Oo Ka Hadlay Go’aankii Maxkamadda Sare, Madaxweynahana Kula Taliyay Inuu Kala Reebo Murashixiinta Xisbiga KULMIYE Ku Hirdamaysa